Lambarkee ayey Kooxda Bayern Munich u gacan gelin doontaa Leroy Sane marka uu ku soo biiro? – Gool FM
(Munich) 20 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa lagu soo warramayaa inay u soo bandhigtay weeraryahanka Manchester City ee Leroy Sane lambarka 10-aad ee Allianz Arena xilli ay kor u qaadayaan raacdada ay ugu jirto xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka.
Mustaqbalka Sane ayaa weli ah mowduuca badan ee la isla dhexmarayo, maadaama qandaraaskiisa Etihad Stadium uu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedka 2020-21.
Bayern waxaa si xooggan loola xiriirinayay da’yarkii hore ee Schalke 04 xagaagii la soo dhaafay, laakiin dhaawac daran oo jilibka ah ayaa ugu dambeyntii ka hor istaagay inuu ka tago garoonka Etihad.
Kooxda heysata horyaalnimada Bundesliga ayaa loo maleynayaa inay ka go’an tahay inay 24-sano jirkaan la soo saxiixato suuqa soo socda, sida laga soo xigtay Wargeyska Bild ee ka soo baxa Jarmalka, waxayna diyaar u yihiin inay u bandhigaan funaanadda lambarka 10-aad ee xiisaha leh.
Philippe Coutinho ayaa xilligan xirta lambarka 10-aad ee kooxda, laakiin xiddiga reer Brazil ayaa la filayaa inuu ku laabto Barcelona xagaagan kaddib markii uu soo dhameystay amaahdii uu kula joogay kooxdan reer Jarmal.
Arjen Robben wuxuu soo xirtay lambarka caanka ah ee Bayern intii u dhaxeysay 2009 iyo 2019, halka ciyaartoyda sida Roy Maakay iyo Lothar Matthaus ay sidoo kale ku ciyaareen lambarka 10-aad ee kooxda ka dhisan Magaalada Munich.